Chii chinonzi solar thermal energy uye inoshanda sei | Green Renewables
Chii uye sei simba rezuva rinopisa rinoshanda
ChiGerman Portillo | | Thermal zuva simba
Kana isu tichitaura nezvesimba rezuva, chinhu chekutanga chatinofunga nezvacho ipaneru. Ndiyo photovoltaic simba rezuva, pamwe rakakurumbira pane mamwe masimba anomutsiridzwa, pamwe nemhepo. Nekudaro, kune imwe mhando: solar thermal energy.
Kana iwe uchida kuziva zvese nezverudzi urwu rwesimba rezuva, kubva pane zvazviri kuenda kune izvo zvarinoshandisa, kuburikidza nehunhu hwaro, ramba uchiverenga 🙂
1 Chii chinonzi solar thermal energy?
2 Zvikamu zvekuisa kwekushisa
2.2 Hydraulic redunhu
2.5 Kutenderera pombi
2.6 Simba rekubatsira
3 Zvinhu Zvinodiwa Kuti Chengeteke
3.1 Kuwedzera ngarava
3.2 Zvokuchengetedza mavharuvhu
3.4 Kupisa kunonyura
3.6 Otomatiki kuzvidzora
Chii chinonzi solar thermal energy?
Seizvo zita rayo rinoratidzira, iyo mhando yesimba rinowedzerwazve uye rakachena iro rinosanganisira kubatanidza simba rezuva kugadzira magetsi. Kusiyana nemapaneru ezuva anoshandiswa mu photovoltaic simba kuburitsa magetsi kubva kumaphotoni echiedza anowanikwa muzuva rezuva, iri simba inotora mukana weiyi radiation kupisa fluid.
Kana mwaranzi yezuva yarova mvura, inoipisa uye inoyerera inopisa inogona kushandiswa mukushandisa kwakasiyana siyana. Kuti uwane zano riri nani, 20% yesimba rekushandisa kwechipatara, hotera kana imba inoenderana nekushandiswa kwemvura inopisa. Nesimba remagetsi ekupisa kwezuva tinokwanisa kudziisa mvura nesimba rezuva uye kurishandisa kuitira kuti, muchikamu chemagetsi ichi, hatifanirwe kushandisa zvisaririra kana rimwe simba.
Chokwadi iwe urikufunga kuti mvura yenzizi, nyanza nemadhamu zvinowoneswa nemwaranzi yezuva uye, zvisinei, hazvipisi. Uye ndezvekuti kutora mukana weiyi yezuva radiation kuiswa kwakakosha kunodiwa kunobatsira kudziisa izvo mvura, gare gare, kuzvishandisa.
Solar thermal energy inobatsira zvakanyanya kudzikisa mutengo, nokudaro ichichengetedza simba uye ichideredza mweya weCO2 uyo unokonzera kudziya kwepasirese uye kukonzera shanduko yemamiriro ekunze.
Zvikamu zvekuisa kwekushisa
Kana tangoziva kuti simba rezuva rinopisa chii, isu tinofanirwa kuve nezvinhu zvakakosha zvekuvaka kumisikidzwa kwezuva kunotibvumidza kutora mukana wesimba remagetsi iri.
Chinhu chekutanga kuti kuiswa kwerudzi urwu kunofanirwa kuve nemuteresi kana wezuva panhare. Iyi solar panel haishande zvakafanana neiyo inozivikanwa photovoltaic. Iyo haina photovoltaic cell iyo inounganidza mafotoni echiedza kuti ishandure iwo kuita simba, asi asi tibvumire isu kutora rezuva radiation kuti titange kupisa iyo fluid kutenderera mukati mavo. Kune mhando dzakasiyana dzevaunganidzi uye nemisiyano mukuita kwavo.
Yechipiri ndiyo hydraulic redunhu. Aya ndiwo mapaipi anoumba dunhu uko kwatinozotakura iyo yekuchinjisa kupisa iyo inozotarisira chiito chatichaita. Iyo dunhu inowanzo kuvharwa mune akawanda maficha. Naizvozvo, pane kutaura nezve nzira imwe matunhu, kubva kupaneru, uye dzoka maseketi, kusvika kupaneru. Zvinoita sekunge dunhu iri raive rudzi rwemvura inogocha iyo inobatsira pakupisa kwenzvimbo.
Ivo vari pamusoro pekutakura kupisa kuburikidza nedunhu. Iyo inopisa exchanger inoendesa iyo simba rakatorwa nezuva kusvika kumvura. Ivo vanowanzo kuve vekunze kune tangi (inonzi ndiro vanachinjana ndiro) kana yemukati (coil).
Sezvo kudiwa kwesimba rezuva hakuwanzo kufanana, se mu photovoltaics, inoda imwe simba rekuchengetedza system. Muchiitiko ichi, iro rezuva rinopisa simba rinochengetwa mune izvo zvinounganidza. Iyi yekuunganidza inokwanisa kuchengeta mvura inopisa kuti iwanikwe patinoida. Iwo matangi ane kugona uye kuputira kunodiwa kudzivirira kurasikirwa kwesimba uye kuchengetedza mvura kupisa nguva dzose.
Kutakura zvinoyerera kubva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe, pombi dzinodiwa dzinoshandira kukunda madonhwe edzvinyiriro emasekete uye masimba ekukweshera nemagetsi.
Kana paine mashoma ezuva mwaranzi, kugadzirwa kwesimba iri kunodzikira. Asi ichi hachisi chikonzero nei chikumbiro chichiitawo saizvozvo. Takatarisana nemhando iyi yemamiriro ezvinhu umo kudiwa kunopfuura kugovera, isu tinoda rutsigiro sisitimu inopisa mvura uye ndizvo rakazvimiririra zvachose nenyika yezuva. Izvi zvinonzi backup backup.
Icho bhaira iyo inotanga kushanda mumamiriro ezvinhu mune iro rezuva kupisa simba kunonyanya kusanakidza uye kunopisa iyo yakachengetwa mvura.
Zvinhu Zvinodiwa Kuti Chengeteke
Izvo zvakakosha kuti uve nechengetedzo sisitimu yekuona kuti iyo yekumisikidza inoshanda mune yakanakira mamiriro uye haina kudzikira nekufamba kwenguva. Izvo zvinhu zvinoumba chengetedzo system ndeaya:
Sezvatinoziva, semvura inowedzera tembiricha yayo, saizvozvowo huwandu hwayo. Naizvozvo, chinhu chinodikanwa icho chinokwanisa kutora uku kuwedzera kwehuwandu sezvo kupisa kwekudziya kwemvura kuri kuwedzera. Midzi yekuwedzera inoshandiswa izvi. Kune akatiwandei magirazi: akavhurika uye akavharwa. Dzinonyanya kushandiswa ndidzo dzakavharwa.
Mavharuvhu anoshandiswa kumanikidza kudzora. Kana iko kukosha kwekumanikidza kwakaiswa munzira yekugadzirisa kwasvika, iyo vharuvhu inoburitsa mvura kudzivirira kudzivirira kumanikidza kusvika pamiganhu inogona kuva nenjodzi.
Glycol chinhu chakaringana fluid kutakura kupisa kweye solar thermal kuisirwa. Chinhu chinonyanya kurairwa ndechekuti zvive mushonga unodzivirira kupisa mhepo, sezvo munzvimbo dzine tembiricha yakadzika kwazvo, kutonhora kwemvura mumatunhu kunogona kuparadza kuiswa kwese. Zvakare, iyo fluid inofanirwa kunge isiri-chepfu, kwete yemota, kwete yekukanganisa, ine yakanyanya kupisa chinzvimbo, haifanire kutambiswa uye kuve nehupfumi. Zvikasadaro, simba raisazobatsira.
Iyo yakanaka mukuisirwa kwerudzi urwu ndeyekuti ive nezana muzana ye60% mvura uye 40% glycol.
Sezvo mune dzakawanda nguva mvura inopisa zvakanyanya, zvakakosha kuve neheatsinks inodzivirira kupisa kwakadai kunotyisa. Kune static heatsinks, mafeni, nezvimwe.
Misungo iyi inokwanisa kutora mweya unoungana mukati memacircuit uye unokwanisa matambudziko akakomba mukushanda kwekuisirwa. Kutenda kune izvi zvinonatsa mweya uyu unogona kutorwa.
Ndicho chinhu chinoita kuti zvese zvishande nemazvo, sezvo ichifungidzira otomatiki kudzora iyo inoyera tembiricha mumapaneru, matangi, zvirongwa, kumisikidza kwemagetsi kupisa singi (kana ino sisitimu iripo), programmer, pombi kudzora, nezvimwe.
Neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve simba rezuva rinopisa uye mashandisiro aro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Thermal zuva simba » Chii uye sei simba rezuva rinopisa rinoshanda
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve bioethanol